Ugonyo lweHepatitis A: Ngaba uyalufuna ugonyo? - Ulwazi Lweziyobisi | Eyenkanga 2021
Izilwanyana Zasekhaya Ukuzonwabisa Imfundo Yezempilo Iindaba Inkampani, Ukuphuma Uluntu, Impilo Ukuphuma Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo, Iindaba Iindaba, Impilo Imidlalo Iziyobisi Vs. Umhlobo Inkampani, Iindaba Impilo
Eyona >> Ulwazi Lweziyobisi >> Ngaba kufuneka ufumane isitofu sokugonya i-hepatitis A?
Ngaba kufuneka ufumane isitofu sokugonya i-hepatitis A?
IHepatitis A (hep A) ikwiindaba zonke. Kwinyanga ephelileyo ePhiladelphia, amagosa ezempilo alumkisile ukubonakaliswa kwindawo yokutyela yaseCity City apho umntu osebenza ngokutya evavanywe enentsholongwane. UAldi noRaley bakhumbula amaqunube aqanduselwe emva kokungcoliseka okunokwenzeka kwe-hep A. Kulo nyaka, i IFlorida kwaye Enew Jersey ndibone ukuvela kwemeko njengoko iimeko ze-hep A ziqhubeka nokunyuka. Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) abika ukuba kubekho isasazeke ngokubanzi Ukuhanjiswa komntu ngomntu nge-hep A kwilizwe liphela, amatyala osulelo anyukile Iipesenti ezili-140 ukusuka ngo-2011 ukuya ku-2017 .
I-Hep A idla ngokuba sisifo esizimeleyo, kodwa sinokubulala, ngakumbi kubantu abadala okanye abo banezifo zesibindi ezinganyangekiyo. Unokufumana i-hep A ngokutya ukutya okanye amanzi okusela angcoliswe ngamanani amancinci esitulo esonakaliswe yintsholongwane ye-hepatitis A (HAV). Oko kunokwenzeka naphi na kwikhonkco lokutya-ukusuka ekukhuleni ukutya ukuya ekusebenzeni nasekuphakeleni. I-Hep A nayo ingadluliselwa ngokuchukumisa indawo engcoliswe sisihlalo esosulelekileyo kwaye emva koko uchukumise umlomo wakho, ngokwabelana ngesondo neqabane elosulelekileyo, kunye nokutshintshiselana ngezinto ezingcolileyo, ngakumbi iinaliti ezosulelekileyo ze-hep A. Iindaba ezimnandi: Kukho isitofu sokugonya i-hepatitis A. Yenza wena Ufuna enye?
Ngubani ofuna ugonyo lwe-hepatitis A?
Ngaphandle kwenani elonyukayo lamatyala e-hep A abonisa, usulelo luyathinteleka. Idosi enye yenaliti yamacandelo amabini okugonya i-hep A inika ama-95% abantu abadala abagonyelweyo ukhuseleko kwiiveki ezine; phantse i-100% yabantu abadala bafumana ukhuseleko emva kwethamo lesibini, elinikwa kwiinyanga ezintandathu kamva.
NgokweAmerican Academy of Pediatrics, abantwana bagonyelwa rhoqo esi sifo Iinyanga ezili-12 nama-23 ubudala . Oku ikakhulu kungenxa yokuba abantwana abancinci, abadla ngokungabikho nto, banokuba ngumthombo omkhulu wosasazo, ngakumbi kumaziko okunakekela abantwana [apho amanabukeni amdaka atshintshwa ngesiqhelo kwaye ukuhlanjwa kwezandla kufanelekile), utsho UBlaine Hollinger, MD , Ilungu leKomiti yeSizwe yezoNyango yezeMpilo yaseMelika.
Ukongeza kubantwana abancinci, i-CDC icebisa ugonyo kuye nabani na okwiqela elinomngcipheko omkhulu. Oko kubandakanya abo:
are ukuhamba kumazwe asakhasayo apho ucoceko olufanelekileyo lungonelanga
amadoda abelana ngesondo namadoda
abanamakhaya okanye baphila ngaphandle kokufikelela lula kwisepha namanzi abalekayo
unesifo esingapheliyo sesibindi njenge-hepatitis B okanye i-hepatitis C
Kwaye wonke umntu?
Ngelixa ithuba lokufumana i-hepatitis A lincinci kwabo bangaphandle kwamaqela omngcipheko, ezinye iingcali zithi akukho nto iphosakeleyo ngokugonywa. Isitofu sokugonya sikhuselekile kwaye sisebenza ngokukuko, uyachaza uAileen Marty, MD, unjingalwazi wezifo ezasulelayo e Ikholeji yeHerbert Wertheim yoNyango eMiami. Ngaphandle kokuba unokuchasana nesitofu sokugonya,kwezonyango, akukho sizathu sokuba ungafanele uyifumane. Ukungqinelana kubandakanya ukugula ngokungagungqiyo (kodwa ungalifumana iyeza ngokukhawuleza nje ukuba uchache), okanye uxabane neendawo ezithile zokugonya.
Isitofu sokugonya i-hepatitis A-esaziwa ngamagama egama I-Havrix kwaye Vaqta -Yenziwe ngentsholongwane engasebenziyo kwaye ithathwa njengekhuselekileyo. Eyona imiphumela Isitofu sokugonya se-hep A sibuhlungu malunga nendawo yenaliti. Iziphumo ebezingalindelekanga ezinqabileyo zibandakanya intloko ebuhlungu, ukudinwa, kwaye (kunqabile kakhulu) ukusabela okungafunekiyo, okunokubonakalisa njengokuphefumla nzima, umkhuhlane omkhulu, imihlathi kunye nentliziyo ebetha ngamandla.
Ugonyo lolona khuselo lubalaseleyo kwi-hepatitis A, kodwa kukho ezinye iindlela zokongeza khusela ngokwakho.
Hlamba izandla ngesepha kunye namanzi ashushu kangangemizuzwana eyi-15 ukuya kwengama-30 emva kokusebenzisa igumbi lokuhlambela, emva kokutshintsha amanabukeni, nangaphambi kokuphatha ukutya.
Geza zonke iziqhamo kunye nemifuno kakuhle , ngakumbi amajikijolo (i-hep A inokuhlala kwiindawo ezinemiqolo eyenziwe ziimbewu).
Pheka ukutya kumaqondo obushushu afanelekileyo okubulala nakuphi na ukungcoliseka.
Sela kuphela amanzi asebhotileni xa usiya kwilizwe elisaphuhlayo. Sebenzisa amanzi asebhotileni ukuhlamba amazinyo kwaye uhlambe iziqhamo kunye nemifuno.
Sebenzisa ulumkiso xa usitya kwiindawo ezifana neetraki zokutya . Qaphela ukuba abasebenzi bakwenza ngokucoceka okhuseleko lokutya (njengokunxiba iigloves, nokungaphathi mali, nokutya). Qaphela ukuba amanzi abalekayo ayafumaneka. Iilori zokutya zi ihlolwe ngamasebe ezempilo kunye neearhente zezempilo, kodwa imigangatho iyahluka. Buza ukuba ubone ingxelo yabo yokugqibela yokuhlola.
Ngala manyathelo, kunye nokugonywa okufanelekileyo, unokuluthintela usulelo kwaye uncede ukuthintela ukuqhambuka kwimeko yakho. Unga Gcina imali kwisitofu sokugonya i-hep A kunye nezinye izitofu ezinekhuphoni ezivela kwi-SingleCare.
Isikhokelo kunyango lwendalo kunye nonyango lokungasebenzi kakuhle kwe-erectile
Unonophelo oluPhambili lwaMadoda: Izinto ezingama-25 eziFunwa ngabafana
unyango njani usuleleko igwele lolusu
Liliphi igama eliqhelekileyo le-acetaminophen?
ndingayithatha i-doxylamine succinate ngelixa ukhulelwe
yintoni igama eliqhelekileyo le-provigil
Ndinokuyisebenzisa njani into yokunyanga usulelo lwegwele
ungathatha i-benadryl yokungezwani komzimba ngelixa ukhulelwe